राजेन्द्र बानिया“ले राजालाई लेखेको पत्र
एभिन्युज टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा कार्यरत चर्चित पत्रकार राजेन्द्र बानियाले पूर्वराजालाई लेखेको पत्र निकै चर्चित बन्यो । पत्रमा उनले यस्तै राजा बनिदिएको भए गणतन्त्र चाहिएकै थिएन भनेका छन् ।
पूर्वराजाले कोरोना रोकथामको लागि हिमानी ट्रष्टमार्फत सरकारले बनाएको कोषमा २ करोड सहयोग गरेपछि पत्रकार बानियाँले पत्र लेखेका हुन् ।
बानियाले सामाजिक संजाल मार्फत राजालाई लेखेको पत्र यस्तो छ–
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेरो चिठठी,
पूर्ब महाराज तपाईं र मेरो निवास नजिकै छ तर भेट हुँदैन । म कहिले काहीं घरको छतबाट तपाईंलाई देख्छु र के छ हालखबर भनेर सोध्नुपर्ला भनेर छतमा उक्लिन्छु पनि । तपाईले मलाई टीभीमा देखेर चिन्नु भाकै छ होला भन्ने भ्रममा छु । मैले त २००७ सालदेखिको इतिहासमा तपाईलाई चिनेकै छु, मात्र तपाईले गद्दी छाडेको दिन तपाईको गद्दीमा बसेर सेल्फी खिच्ने पत्रकारको भिडमा म थिइन । मलाई तपाइको साँच्चै मायाँ लाग्छ । तपाईलाई ४ बर्षमा राजा बनाइयो, तपाईलाई थाहा नै थिएन किन बनाइयो, किन हटाइयो ?
तपाईलाई पञ्चायत चलेको बेला खासै कसैले पुछेनन्, पुछ्न पनि परेन । तपाईं चुरोट, चिया लगायतको ब्यापारमा लाग्नु भो, कतिले मुर्ती पनि मिसाएर बिदेश तिर व्यापार गर्नुहुन्थ्यो भन्छन् । जब तपाईका दाजुको बंशनाश भो, तपाईं चर्चामा फेरि आउनुभो ।
कतिले दाइमारा भनेर चर्चा गरे कतिले राजा ? तपाईले देश चलाउने मौका पाउँदा मन चौधरीको जस्तो ब्यापारी, अनि इच्छा बाबू महेन्द्रको जस्तो महत्वकाँक्षी भएर चिप्लिनु भो । कम्तिमा दाजुको चार आना जमिन आफ्नो नाममा ल्याउने लोभ नगरी देश नै मेरो सम्पती अनि देशबासीनै मेरा सन्तान भनेको भए तात्कालिन सात दल बदामका ग्राहक हुन्थे, अनि माओवादी श्रीलंकाका तमिल । तर उद्दण्ड भनिएका पुत्र पारसको मोह धृतराष्ट्रका लागि दुर्योधन जस्तो भो ।
तर सलाम छ पूर्ब राजा, २४० बर्षको बिरासत छोड्दा पनि तपाईं हाँस्दै जानु भो । तपाईलाई यतिभन्दा फुट्दा तपाइले फुटाइदिएको र जुट्दा आफै भन्ने पूर्ब मण्डलेहरुलाई म पञ्च र राजाबादी लाग्ला । अनि क्रान्तिकारीको नाममा जनता रुवाउन पल्केकालाई म प्रतिगमनकारी लाग्ला । म कम्तिमा पनि तपाईको निरंकुश चरित्रको विरुद्ध सडकमा निस्केको सचेत नागरिक हो । भ्रममा नपर्नु होला ।
पछिल्ला दिनमा तपाईं मन्दिर डुल्दा र डिस्कोमा टोपी लाएर राष्ट्रबादी बन्दा मलाई तपाईमाथि धिक्कार लागेको थियो । नेपाली आमाले नेता र राजा जन्माउने कोख एउटै रहेछ भन्ने पनि लाग्या थियो । धेरै हिजोका हात्तीछाप आजका बेन्ट्ले नेता र तपाईं उस्तै लागेको थियो । मलाई त नेताहरु जस्तै तपाईं पनि कोभिड–१९ भएर या आशंकामा आइसोलेसनमा बसेकाले अनुहार देख्न नपाइएको होला जस्तो पनि लाग्या थियो ।
तर पूर्ब राजा, बीपी प्रजातन्त्रका घाती थिए भन्छन्, मलाई थाहा छैन । उनलाई इन्दिरा गान्धीले घोक्राउने भएसी राजासङ्ग घाँटी जोडिएको छ भनेर ३३ सालमा नेपाल आएका हुन् तर उनले राजा कम्तिमा नि राष्ट्रलाई मायाँ गर्छन् भनेका थिए । हो रहेछ ।
प्रीय पूर्ब राजा, हिजै ब्यापारीबाट राजा बन्देको भए हामीलाई यस्तो नेता धनी र जनता गरिब हुने गणतन्त्र चाहिएको नै थिएन । हामीलाई एउटा राजाको ठाउँमा रजौटा चाहिएको नै थिएन । हामी यी दर्जनौलाई अर्बौं दिनु सट्टा तपाईलाई खुशी खुसी महिनाको चार करोड दिन्थ्यौ । आज तपाईले कोरोनाले रोइरहेका गरिबलाई २ करोड दिने भनेर फेरि नेता भन्दा माथी हुनु भाको छ । मलाई मैले भात खुवाएको आज भुजा खाने, हिजो चप्पलको तुना फेर्ने आज बतननै फेर्ने, हिजो जनै नलगाउने आज हिराको हार लगाउने, हिजो हिड्दा खुट्टा फुट्ने आज ८४ ब्यञ्जन नपचेर भुँडी फुट्ने नेता भन्दा तपाईं प्यारो लाग्न थाल्यो पूर्ब राजा ।
राष्ट्रबादी, बालाजु,माछापोखरी ।